अमेरिकासँग वार्ता गर्न किन तयार भयो इरान ! « Khasokhas
अमेरिकासँग वार्ता गर्न किन तयार भयो इरान !
तेहरान, इरानी राष्ट्रपति हस्सन रौहानीले संयुक्तराज्य अमेरिकाले आफूहरु विरुद्ध लगाएको “अवैधानिक” आर्थिक प्रतिबन्धहरु फुकुवा गरेमा आणविक वार्ता गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
राज्यद्वारा सञ्चालित टेलिभिजनमा बुधबार अन्तर्वार्ता दिँदै राष्ट्रपति रौहानीले इरान सम्बन्धी अमेरिकी नीतिहरुमा फेरबदल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति रौहानीले इरानमाथि लगाइएका सबै प्रतिबन्ध हटाउन संयुक्तराज्य अमेरिकाले पहिलो अग्रसरता देखाउनुपर्ने पटक पटक आग्रह गरिरहनु भएको छ ।
“पहिलो कदम भनेकै प्रतिबन्धहरु हटाउनु नै हो । इरानमाथि लगाइएका सबै गैरकानुनी, अन्यायपूर्ण र गलत प्रतिबन्धहरु फिर्ता हुनु पर्दछ ।” राष्ट्रपति रौहानीले भन्नुभयो, “सकारात्मक परिवर्तनको साँचो वासिङ्टनको हातमा छ ।” उहाँले संयुक्तराज्य अमेरिकालाई सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषयका रुपमा रहेको आणविक बम बनाउने कुरा इरानले पहिल्यै त्यागिसकेको पनि बताउनुभयो ।
“यदि अमेरिकी सरोकार सही हो भने यसलाई हामीले पहिल्यै सम्बोधन गरिसकेका छौं । इरानी सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अलि खामेनीले जारी गरेको एउटा आदेशबाट यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।” खामेनीले सन् २००३ मै आणविक हतियार नबनाउने बारेमा विशेष आदेश ९फत्वा० जारी गरिसकेको इरानी दाबी छ ।
“त्यसर्थ पहिलो कदम अमेरिकाले नै लिनु पर्दछ । यो कदम बेगर यो गाँठो खुल्दैन,” राष्ट्रपति रौहानीले भन्नुभयो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष सन् २०१५ को बहुपक्षीय आणविक सम्झौताबाट एकपक्षीय रुपमा अलग हुँदै इरान विरुद्ध कडा प्रतिबन्धहरु घोषणा गर्नुभएको थियो ।
शिकागोमा सप्ताहन्तभर ११ जना बालबालिकामाथि गोली प्रहार
अमेरिकाको शिकागोमा सप्ताहन्तभर ११ जना बालबालिकामाथि गोली प्रहार भएको छ । शुक्रबार एकजना ८ बर्षकी
अमेरिकामा ४२ राज्यमा ४६७ जनामा कोरोना भाइरस परीक्षण
अमेरिकामा अहिलेसम्म ४६७ जनामा कोरोना भाइरस भए नभएको परीक्षण गरिएको छ । अमेरिकाका विभिन्न ४२
क्यालिफोर्नियामा घरभित्रै १४ सय बढी गैरकानुनी गाँजाका बोट, प्रहरीबाट कब्जा
अमेरिकाको उत्तरी क्यालिफोर्नियामा एउटा घरभित्रै रोपिएका १४ सय बढी गाँजाका बोटहरु प्रहरीले फेला पारेको छ
अमेरिका : ११ सय भन्दा धेरै पूर्व अधिकारीबाट महान्यायाधिवक्ताको राजिनामा माग
अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्टका ११ सय भन्दा धेरै पूर्व अधिकारीहरुबाट महान्यायाधिवक्ता (अमेरिकी न्यायमन्त्री) विलियम बारको राजिनामा
अमेरिकामा एसाइलम गरेका नेपाली भारतहुँदै स्थलमार्गबाट नेपाल गएर आउन समस्या हुनसक्ने
अमेरिकन आइडलमा चम्किदै नेपाली युवा दिवेश पोखरेल, अर्को राउण्डमा प्रवेश
नेपालीले स्थलमार्ग हुँदै भारत गएर भारतीय विमानस्थलबाट तेश्रो मुलुक उड्न नपाउने
अमेरिकन आइडलको टप २० मा छानिए नेपाली युवा दिवेश पोखरेल